Bogga ugu weyn 10 Meelood Si Aad U Hesho Kirooyin RV Jaban $ 1/maalin
Waxay u egtahay mid qosol leh ?! $ 1 maalintii oo dhan RV oo dhan, waddan dhan ?! Dhab ahaantii ma eedeeyo shakigaaga. Waa maxay sababta ay shirkaddu u bixinayso kirooyinka RV ee jaban? Waa inay ku kacdaa wax intaas ka badan, markaa maxaa kiraynta aadka u jaban ee RV?
Baabuurka madadaalada (RV) waa hab fiican oo lagu safro maadaama ay u oggolaanayso dadka deggan inay ilaashadaan fogeynta bulshada iyagoo weli ku raaxeysanaya safarka. Si kastaba ha ahaatee, dhibaatadu caadiyan waxay ahayd qiimaha kiraynta RV maadaama ay badanaa yihiin kuwo qaali ah.
Shirkadahaani waxay ballanqaadayaan inay meesha ka saarayaan dhibkaas kirooyinka RV ee jaban ee ay ballanqaadaan. Aynu ogaanno suurtagalnimada kireysigaan RV ee jaban maqaalkan.
Xagee Ka Heli Karaa Kirooyinka RV Jaban?
Waxaad ka heli kartaa kirooyin RV raqiis ah mid ka mid ah shirkadahaan:
iMoova wuxuu u shaqeynayay ilaa 2005 isagoo ah Standbycars. Hadda, waxay khibrad iyo xiriir la leeyihiin alaab -qeybiyeyaasha si ay ku siiyaan inta ugu badan qiimaha safarka macquulka ah.
Waxaad awoodi kartaa adduunka u safri kirada dib u dejinta laga bilaabo $ 1 maalintii. RV, kambaska iyo shirkadaha kirada baabuurta waxay ku iibiyaan kirooyinka dib -u -dejinta imoova.com si ay lacag ugu badbaadiyaan bixinta darawalada iyo baabuurta xamuulka. Waxaad uga faa'iideysan kartaa fursadan kireysiga RV ee jaban.
Illaa $ 1 maalintii, Imoova.com waxay la jaanqaadi doontaa safarkaaga fasaxa iyo taariikhaha gaadiidka u baahan dib -u -dejinta.
Waxaad ka dalban kartaa onlayn liiska safarada la heli karo ee Australia, New Zealand, USA, Canada, iyo Europe ama wac taleefanka xarunta 7-maalmood. Haddii aadan heli karin safarka aad doorbidayso, ku biir liiska sugitaanka si laguugu ogeysiiyo SMS iyo emayl marka ciyaar la heli karo.
#2. Gaadhi wareejin
Waxaa la aasaasay 2008, Transfercar waa shirkad kheyraad u leh kirooyinka RV ee jaban, kaas oo bixiya baabuur ka badan RV -yada. Waa suuq guuritaan baabuur kiro ah oo si xawli ah u koraya, kaas oo u oggolaanaya dadka socotada ah in ay helaan ku dhawaad ​​100 kun oo baabuur kiro ah meelo waaweyn.
Gaadhi wareejin kireystayaashu waa inay bixiyaan canshuuraha khasabka ah, khidmadaha, iyo khidmadaha ay soo rogeen garoomada diyaaradaha ama hay'adaha dawladda hoose iyo kuwa gobolka. Sidoo kale, shidaalka uu kiraystuhu isticmaalo ayaa mas'uul ka ah kiraystaha, haddii aan la iska indho tirin shuruudaha kirada.
Intaas waxaa sii dheer, hawlwadeennada kireysiga waxay u arki karaan inay lagama maarmaan tahay inay ka qaadaan $ 1 maalintii si loo buuxiyo shuruudaha garoonka.
Waxaa aasaasay, Torsten Herbst 2009, Coseats waxay higsaneysaa inay noqoto Airbnb ee warshadaha gaadiidka. Waxay u noqdeen barxad caan ah oo loogu talogalay dadka raacaya, kuwa rakaabka ah, iyo dadka socotada ah ee doonaya inay wadaagaan raacitaanka Australia oo dhan.
Goobtu waxay kasbatay in ka badan 20,000 isticmaaleyaal diiwaangashan ilaa maanta waxayna fududeysay in ka badan 40,000 oo raacitaan. Hase yeeshee, dakhliga ugu weyn ee ganacsigu wuxuu ka yimid dib -u -dejinta xerada.
Coseats.com wuxuu kaloo bixiyaa kirooyin RV oo raqiis ah ugu yaraan $ 1 oo dib loogu raro Australia iyo New Zealand. Intaa waxaa dheer, waad iska eegi kartaa basaska adiga oo aan bixin wax khidmad ah oo ballansasho ah.
ApolloRV Rentals waa qayb ka mid ah kooxda Apollo ee caalamiga ah oo lagu aasaasay Australia 1985. Waxay hadda noqdeen mid ka mid ah hawlwadeennada gaadiidka fasaxa ee ugu weyn adduunka, oo leh 7 laamood oo ku yaal USA oo dhan.
Sababtoo ah waxay ku jireen warshadaha kirada muddo ka badan 30 sano, hubaal waa guul u soo hoyatay shirkadda iyo soo jiidasho kiraystayaasha.
Dad badan oo socotada ah ayaa si fudud u dooran lahaa shirkad leh waayo-aragnimo ballaadhan oo loo malaynayo ganacsiga, sidaa darteed Apollo waa shirkad u tagta kirooyinkaaga RV. Waxay kaloo bixiyaan kiro jaban oo qiimahoodu yahay $ 1.
In kasta oo ay jiraan waayo -aragnimo soo jiidasho leh oo la duubay, haddana waxaa jira dib -u -eegisyo taban oo soo noqnoqda. Sidaas oo ay tahay, gawaarida saaran maraakiibta ayaa aad u soo jiidasho leh, gaar ahaan sababta oo ah moodooyinka cusub ee qiimahoodu yar yahay.
JUCY wuxuu ku bilaabay raxan 35 baabuur oo kiro ah sanadkii 2001 Auckland, New Zealand. Iyadoo in ka badan 4,000 oo baabuur iyo campeRVans ah oo ku baahsan Australia, New Zealand iyo USA JUCY waxay raadinayaan inay xukumaan adduunka kirooyinka RV.
Waxay kaloo ku shaqeeyaan laba doomood oo JUCY Cruise ah Milford Sound, New Zealand, iyo hoyga JUCY Snooze ee Auckland, Christchurch, iyo Queenstown.
Waxay adeegsadaan baraha bulshada si ay ugu xiraan bulshada socotada ah. JUCY hadda waxay leedahay in ka badan 80,000 oo taageerayaal Facebook ah, in ka badan 24,000 Instagram, iyo in ka badan 11 milyan oo aragtiyo YouTube ah. Waxay siiyaan XUQUUQDOYDA socdaalayaasha u dhexeeya 18-35-jir.
Shirkadda waxaa maamula walaalo, Tim iyo Dan Alpe oo ah Madaxa JUCIFIER iyo Sarkaalka Hawlgalka.
Bannaanka bannaanka ayaa isu xayeysiiya sidii Airbnb ee kireysiga RV oo u oggolaanaya milkiilayaasha RV iyo campeRVan inay ku kireystaan ​​baabuurtooda qiimo jaban, xitaa haddii waddada ama taariikhaha kirada ee aad rabto aysan u dhigmin heshiiska dib -u -dejinta.
Waxay bixiyaan SEVVice kiro ah RV taas oo raqiis ah marka la barbar dhigo xaddiga kirada caadiga ah ee RV. Waxay bixiyaan kirada RV raqiis ah $ 1 marka loo eego kumanaanka doollar oo leh qiimayaal maalinle ah oo sarreeya oo ay ku bixinayaan masaafada.
Sidoo kale, waxaa ku jira caymis, 24/7 kiro caawinta wadada, oo laga heli karo adduunka oo dhan. Haddii aad raadinayso inaad u guurto, Outdoorsy waa mid ka mid ah siyaabaha ugu jaban ee loo kireeyo RV.
#7. Orso waddo
Road Bear wuxuu shaqeynayay ilaa 1980. Waxay dhiseen Camper Van -koodii ugu horreeyay markaa, ilaa maanta, waxay ku dadaalaan baadi -goobkooda su'aal la'aanta ah inay "u noqdaan kuwa ugu wanaagsan macmiilka". Waxay kaloo hubiyaan in dadka socotada ah ay si dhab ah u dareemaan “Macmiilku waa Boqor” ee Road Bear RV.
Muddo 30 sano ah oo ku jirtay meheradda kirada RV iyo ilaa 7 goobood oo ku yaal Mareykanka oo dhan, waxay wali hiigsanayaan inay siiyaan khibrad raqiis ah oo xiise leh safrayaasha si ay ugu sii celiyaan Wadada Bear RV.
#8. Dalxiis Kanada
Iyada oo leh 132 goobood iyo in ka badan 300 oo shaqaale ah xilligii ugu sarreeyay Mareykanka iyo Kanada, shaqaalaha ayaa iska leh, Mesa, AZ. shirkad fadhigeedu yahay waxaa bilaabay Robert Smalley Sr oo u dhashay Florida sannadkii 1972. Hadda, waxay ku jirtaa shirkadda ugu weyn ee kiraynta RV ee qaranka.
Wiilasha Smalley, Maamulaha iyo Guddoomiyaha Randall Smalley, iyo Madaxweyne Robert Smalley Jr., ayaa la keenay nidaamka isla markii laga baxay kulliyadda si ay gacan uga geystaan ​​bilowga iyo socodsiinta shirkadda, oo ay joogaan meesha ugu sarreysa ilaa maanta.
Ka dib markii ay aruursadeen 45 sano oo waayo -aragnimo ah warshadaha kirada RV, waxay iska dhiseen dalka oo dhan sida shirkadda kirada ugu weyn ee RV. Dalxiis Kanada hadda waxay leedahay 127 goobood oo ku yaal 33 gobol iyo shan gobol oo Kanada ah.
Waxay caawiyaan boqolaal kun oo socdaalayaal ah oo ka kala socda daafaha dunida oo fuliya safaradooda RV sanad walba. Laga soo bilaabo xulashada gaariga ugu fiican si loo sawiro safarkooda iyo xulashada waxyaabaha ay u baahan doonaan inta ay jidka ku jiraan.
Ku dhufo Waddada.ca Xafiisku wuxuu ku yaalaa badhtamaha magaalada Toronto ee Dhismaha Star Star ee 1 Yonge Street.
Waxay yihiin adeeg gaarsiinta gawaarida Kanada oo bixiya gaarsiinta baabuurta, baabuurta waaweyn, iyo RV -yada Kanada oo dhan iyo ka -imaanshaha Mareykanka.
Si loo abuuro ikhtiyaarro gaadiid oo maanka ku haya, waxay bixiyaan qaar ka mid ah gaadiidka kirada RV ee jaban ee Kanada oo dhan.
Waxay shaqeynayeen tan iyo 2005 waxayna xubin ka yihiin Xafiiska Ganacsiga Wanaagsan tan iyo 2009. Waxaa kaloo lagu soo bandhigay dhowr qaybood oo warbaahineed, oo ay ku jirto mid dhowaan Sheekada wararka ee CTV.
Fraser waa ganacsi qoysku leeyahay oo shaqeynayay tan iyo 1969. Waxay yihiin Canadas oo kaliya ka ganacsadayaal qaran oo leh meelo xeeb ilaa xeeb ah. Waxay bixiyaan iibin adeeg-buuxa ah oo ku dadaalaysa inay wax walba u fidiso RV-gaaga iyo soo-bandhigyadaada RV-qaybo, adeeg, iibin, ama kiro.
Haddii aad keligaa tahay xerada xamuulka, qoys dhallinyaro ah oo leh taangiga teendhada, qoys weyn oo leh taayirrada safarka ee moodada ah, ama qof madhan oo madadaalo ah oo ku jira hiwaayadda guriga mootada, Wadada Fraser
ballanqaadaya inuu kuu helo RV -ta kuugu habboon.
Maxay Kireystayaasha RV Ku Saabsan yihiin?
Heshiisyada RV iyo dib -u -dejinta baabuurta waxay dhacaan marka shirkad kiro ah ay u baahan tahay in gaadiidkooda laga raro hal meel oo loo wareejiyo meel kale. Habkan dalabka shirkadu wuxuu si siman u waafajin doonaa bixinta RV -kan ee socdaalayaasha. Mararka qaarkood in kastoo, baabuurta loo raro meel loo socdo si loogu iibiyo RV -yada kale ee la isticmaalay.
Baabuurta, baabuurta xamuulka, iyo kuwa xamuulka qaada ayaa iyaguna u baahan in la raro. Si kastaba ha ahaatee, RV -yada iyo campervans -ka ayaa ah waxa loo baahan yahay in inta badan la dhaqaajiyo.
Maxay Kirooyinka RV u yihiin kuwa jaban?
Maadaama ay wakaaladda kirayntu sii waddo inay kiraysato RV-ga hal dhinac ah, waxay ogaadaan mar uun in RV-yadu ku baahsan yihiin dalka oo dhan. Si dib loogu celiyo goobihii la rabay waa inay lacag badan ku kacdaa. Waxay u badan tahay inay lacag siiyaan qof si hal waddo u kaxeeya dabadeedna dib u daboola duulimaadkooda.
Beddelka taas ayaa ah in la sameeyo dalabyo qosol leh oo raqiis ah oo loogu talagalay dadka safarka ah si loogu dhiirrigeliyo inay rabaan kirooyinka RV oo ay geeyaan meeshii ay ahaan lahaayeen.
Hadda, waxaa laga yaabaa inaad mas'uul ka tahay kharashka shidaalka. Si kastaba ha ahaatee, heshiisyada qaarkood waxaa ka mid noqon kara magdhow shidaal qayb ahaan qiyaastii ah $ 50 illaa $ 500, haan shidaal oo lacag la'aan ah, ama xirmo kijin oo lacag la'aan ah.
Caadiyan, usbuuca labaad ilaa saddaxaad ka hor inta aan la rarin baabuurka, faa'iidooyinkaas ayaa markaa lagu dari doonaa. Ka xaqiiji shirkadda haddii $ 1 ay sidoo kale u adeegi lahayd jikada, xirmada dharka linenka, iyo waxyaabaha kale ee daruuriga ah, si aad adigu u soo qaadato.
Ma Jiraan Xaddidyada Mileage ee Kirooyinka RV ee Jaban?
Taasi waxay ku xirnaan doontaa shirkadda. halka qaar ka mid ah laga yaabo inaysan wax ka qaban masaafada inta RV -ga uu gaarayo meesha la rabo, qaar baa laga yaabaa inay oggolaadaan oo keliya tirada gaarka ah ee kiiloomitir ee loo baahan yahay inay timaad goobtaada.
Isku day inaad xaqiijiso haddii ay jiraan xannibaadyo xagga masaafada ah, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in lagaa rabo inaad ku bixiso doolar dheeraad ah kiiloomitir kasta oo dhaafa.
Kiraynta RV $ 1 maalintiiba runtii waa mid raqiis ah oo soo jiidasho leh. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiri kara kootada hoose ee loo malaynayo “kirooyinka RV ee jaban”. Hubi inaad xaqiijiso waxa geedi socodku si buuxda u khuseeyo.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad raadineyso inaad guurto, ama aad qorsheynayso a safarka wadada ee fasaxa, markaa tani waa fursadda ugu fiican adiga. Waxaad heli doontaa waayo -aragnimada buuxda oo yar ama kharash la'aan.
Caymis Baabuur jaban ee Darawalada Cusub ee ka yar 25
Dib -u -eegista Kiraynta Buugga Campus: Sharci ama Fadeexad | Siduu U Shaqeeyo
Sida Loo Noqdo Wakiil Socdaal Oo Ka Socda Guriga | Talaabooyinka Fudud
Meelaha Ugu Fiican Ee Laga Helo Sawirada Baasaboorka Jaban | Offline & Online
Dib -u -eegista Ventures -ka Adduunka: Fadeexad kale oo Adeegga Safarka ah ama Maxay tahay?
13 meelood oo aad ka heli karto Freebies maalintaada dhalashada 2022
Maalmaha dhalashadu waxay yimaadaan hal mar sannadkii waxayna mudan yihiin in loogu dabaaldego hababka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah. Waxaad samayn kartaa…
2022 Barnaamijyada Samsung Smart TV ee Hack Adigu Ma Tijaabin
TV -yada casriga ah waxaa markii hore loo yaqaanay aalado isku xiran. Waxay caadi ahaan ku xirnaan karaan internetka, adeegsiga barnaamijyada,…
7 Meelood oo lagu deeqo Muraayadaha indhaha 2022 -ka
Mar kasta oo aad rabto inaad bedesho muraayadahaaga, waxaad u badan tahay inaad dooran lahayd inaad ka takhalusto jir-gacan iyo…